जहाँ नन्द-भाउजूबीच बिबाह हुन्छ, किन यस्तो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more जहाँ नन्द-भाउजूबीच बिबाह हुन्छ, किन यस्तो ?
भारत । नन्द भाउजुबीचको सम्बन्धलाई विशेष मानिन्छ । तर भारतको गुजराँतमा चाहीँ नन्द र भाउजुबीच बिहे हुन्छ । हो, भारतको गुजराँतस्थित एक गाउँमा यस्तो अनौठो प्रथा छ ।
बिहे अवधिभर बेहुलाकी बहिनीले आफ्नो शिरमा चामल भरिएको अम्खोरा राख्छिन् । यसरी चामल भरिएको अम्खोरा शिरमा राख्दा आफ्नो दाजूमाथि कुनै दुष्ट नजर नपर्ने मान्यता छ । यो गाउँमा उल्टो दाइजो प्रथा छ । दुलहीका घरवालाले होइन दुलाहापट्टकिाले दाइजो दिनुपर्दछ । एजेन्सी
माघ ८ गते, २०७४ - १७:४२ मा प्रकाशित